SIGESP: Rafitra fitantanana Public Integrated - Rindrambaiko maimaim-poana ho an'ny orinasa tsy miankina | Avy amin'ny Linux
SIGESP: Rafitra fitantanana Public Integrated
SIGESP dia rafitra fitantanan-draharaha noforonin'ny orinasa tsy miankina Venezoeliana ho an'ny fitantanan-draharaham-panjakana ao amin'io firenena io. Ny anarany dia avy amin'ity fanafohezana manaraka ity: Rafitra fitantanana Integrated ho an'ny sehatra ara-panjakana (SIGESP). Izy io dia rindrambaiko maimaimpoana maimaimpoana izay afaka miasa ho maodely ho an'ny firenena hafa amin'ny resaka Rafitra fitantanana ny daholobe ho an'ny fitantanan-draharaham-panjakana.
Ny orinasa tsy miankina izay namorona ny SIGESP System, dia manana anarana mitovy amin'ilay Rindrambaiko, ary eo am-panatanterahana ny fampiroboroboana ny sehatra iraisam-pirenena, Orinasa tsy miankina manana traikefa mihoatra ny roapolo (20) taona amin'ny fampandrosoana, fakan-kevitra ary fanohanana ny fangatahana fitantanan-draharaha eo amin'ny tsena Venezoeliana. Izay mampiseho amintsika ny mety sy ny tsara amin'ny fotoana ana orinasa na hetsika tsy miankina mamokatra Rindrambaiko Maimaimpoana ho an'ny faritra rehetra.
Fa inona no tombony azo amin'ny fampiharana any anaty rindrambaiko tokana amin'ny raharaham-pitantanana, navoakan'ny tenany na avy amin'ny orinasa tsy miankina amin'ny fireneny? Eny, ankoatry ny zavatra maro hafa, mahazoa vokatra mahomby sy mahomby amin'ny fanohanana ny famokarana, ny mangarahara ary ny fanatsorana ny fitantanan-draharaham-bahoaka.
Tsy manisa ny tombony azo amin'ny fanokafana asa amin'ny Public na Private Administration, Fanofanana ny talenta maha-olona manana kalitao amin'ny sehatry ny Fandaharana sy fitantanana.
Ankoatr'izay, ny fitantanan-draharaham-panjakana amin'ny firenena rehetra dia manana Rindrambaom-pirenena amin'ny raharaham-pitantanana ny fitantanan-draharaham-panjakana dia manohana ny asa rehetra., ny fananganana sy ny fampandrosoana ny fampiharana ny maodely fitantanana sy ny rafitra ara-dalàna momba ny fitantanan-draharaham-pirenena.
Ary mamela ny fitehirizana vola vahiny amin'ny alàlan'ny fanafarana ny vokatra, fahazoan-dàlana ary fanohanana, manampy ny mety hahatonga azy io ho azo antoka sy azo antoka kokoa, ary hiantohana ny fampiasana mora kokoa sy miharo kokoa miaraka amin'ireo fitaovana hafa ao amin'ny firenena manontany ny toerana ampiharana azy.
1 Inona no atao hoe SIGESP?
2 Inona ny atao hoe SIGESP CA?
3 Inona no atolotry ny lozisialy Free Public Management Software ho an'ny firenena?
4 Amin'ny lafiny teknolojia, ahoana ny fomba fananganana SIGESP?
5 Inona no mampiavaka ny lozisialy SIGESP Free?
Inona no atao hoe SIGESP?
SIGESP araka ny mpamorona azy dia:
Una fitaovana fitantanan-draharaha namboarina teo ambanin'ny rafitra ara-kevitra sy ara-dalàna omena ho an'ny andrim-panjakana; izay ny tanjony dia ny hamokatra vaovao momba ny kaonty sy ara-bola amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra, novokarin'ny tetibola.
Izany hoe, izy io dia rafitra iray mitambatra izay manamora ny fizotry ny fitantanana fitantanana amin'ireo orinasam-panjakana izay ametrahana azy. Izy io dia misy andiana modely azo ampifanarahina amin'ny mpanjifa tsirairay, izay mitantana asa samihafa ary manome valiny eo noho eo sy ara-potoana ny filan'ny teti-bola, fananana, kaonty ary ny fisoratana anarana amin'ny fitantanan-draharaha.
Inona ny atao hoe SIGESP CA?
SIGESP CA dia orinasa mpanolotsaina, fampandrosoana ary fampiharana ny Integrated Systems ho an'ny fitantanana fitantanana ny orinasam-panjakana ao amin'ny fireneny. Nilaza ny orinasa tsy miankina ankehitriny fa hanome vahaolana teknolojia lehibe kokoa sy tsara kokoa ho an'ny tsena nasionaly sy amerikanina latina.
Ambonin'ny zava-drehetra, fametrahana ny fifanarahana stratejika ilaina ao anatiny sy ivelan'i Venezoela. izay ilaina hanatanterahana an'io tanjona io, toy ny, miaraka amin'ny Ieager e IDP Consulting.
Ity orinasan-rindrambaiko maimaimpoana tsy miankina mahomby ity dia manolotra ny mpanjifany:
Fampandrosoana tsy tapaka sy miankina amin'ny tena manokana amin'ny alàlan'ny ekipa matihanina hanohanana ny mpanjifany amin'ny famolavolana, famerenana amin'ny laoniny ny fizotrany, fametrahana, fampifanarahana, fanitarana ary fitantanana ny sehatra fitantanana fitantanana azy.
Fiofanana maoderina sy mandroso amin'ny alàlan'ny programa fiofanana hampiofanana sy hanome ny fahafaha-manao, fahalalana ary fahaiza-manaon'ireo mpiasa izay mampiasa ny Rafitra ho fanatanterahana ny rafitra mahomby.
Fanohanana mahomby sy mahomby: Manana fahalianana manokana amin'ny fampandehanana marina ny vahaolana teknolojika izy ireo, ka izany no nanolorany tena ho anao hanohana anao amin'ny famahana ny olana sy ny olana.
Inona no atolotry ny lozisialy Free Public Management Software ho an'ny firenena?
Ny rindrambaiko maimaim-poana amin'ny karazana rehetra, fa indrindra ny fitantanana, dia afaka manolotra fikambanana miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana arakaraka izay azo atao amin'ny lalàna mifehy ny firenena misy azy, ary ny tanjona sy ny maodelin'ny orinasam-panjakana sy ny tsy miankina Organisation izay mampihatra izany, noho ny fenitra misokatra.
Ankoatra izany, Ny rindrambaiko fitantanana ny daholobe maimaimpoana dia afaka manome fanohanana mahomby sy mahomby amin'ny fahombiazana, mangarahara, fiarovana ary fanatsorana ny fitantanan-draharaham-panjakana amin'ny firenena rehetra. Ary avelao amin'ny fomba mahomby kokoa ny fampifangaroana amin'ireo teknolojia maoderina izay mampitombo sy manome antoka ny fahamendrehany manoloana ny fiarahamonina.
Amin'ny tranga manokana momba ny lozisialy maimaim-poana, ny SIGESP ao amin'ny firenena namoronana azy dia ahitsy amin'ny volavolan-dalàna (CRBV, LOAP, LOAF, LOPA ary LOT) sy ny fikambanana (ONAPRE, ONCOP ary CGR) izay mifehy ny asan'ny National Public Administration (APN). Saingy azo ampifanarahana amin'ny firenena hafa izay kasaina hampiharina.
Saingy amin'ny ankapobeny, ny SIGESP na rindrambaiko fitantanana maimaimpoana maimaimpoana hafa dia mety hitarika amin'ny ambaratonga avo lenta amin'ny fahombiazana sy fahombiazan'ny fomba fitantanan-draharaham-panjakana., ary hampiakarana ny kalitaon'ny serivisy ho an'ny besinimaro (olom-pirenena) nefa tsy hihena ny filaminana sy ny mangarahara amin'ny fampahalalana sy ny fizotrany natao.
Amin'ny lafiny teknolojia, ahoana ny fomba fananganana SIGESP?
Araraoty ny fampiasana ireo fiteny fandikana adika toa ny:
Fandaharana Internet izay mamadika azy ho programa: client / server.
Fanamorana ny debugging ary ny dynamismany lehibe, izay mampitombo ny zava-bitany.
Architecture an'ny rindrambaiko maoderina mifototra amin'ny Model View - Controller (MVC)
Ankoatr'izay, ny SIGESP dia mampihatra haitao maoderina sy tena miasa amin'ny interface-ny., toy ny: tranomboky EXT hanatsarana ny fomba fijery sy ny ADODB hanatsarana ny fifandraisana amin'ny tahiry, izay ahafahana manome tatitra momba ny firaketana an-tsokosoko sy mahomby.
Ary mampiasa algorithm fanalahidy fanalahidy, izay manome rafitra maoderina hitazonana lakile fidirana azo antoka kokoa. Fiarovana lehibe kokoa eo amin'ny sehatry ny fizotrany, izay midika fa tsy aseho ny anaran'ny fisie sy ny masontsivana.
Inona no mampiavaka ny lozisialy SIGESP Free?
Vahaolana azo ampifanarahana amin'ny filàna sy ny takiana.
Module tafiditra tanteraka.
Fanavaozana ny rafitra tsy tapaka
Fanarahana henjana ny lalàna mifehy ny hetra ankehitriny.
Fandraisana an-tsary intuitive sy mora ampiasaina.
Fidirana amin'ny rafitra miaraka amin'ny lakile fiarovana tsirairay.
Fiarovana faran'izay betsaka sy fahatokisana tanteraka ny fampahalalana.
Tatitra marobe handrefesana, azo aondrana any Excel sy PDF.
Teknolojia avo lenta ho an'ny fikirakirana tsara sy haingana ary azo antoka.
Architecture an'ny mpanjifa / mpizara.
Fivoarana miorina sy matotra amin'ny PHP 5.
Fampiharana amin'ireo mpamily base data Mysql 5 sy Postgres 9.4
Multi-platform (Windows, Linux) mifototra amin'ny Web.
SIGESP dia traikefa tsara indroa sy mahomby, satria amin'ny lafiny iray dia asehony ny maha-zava-dehibe ny synergy misy eo amin'ny Orinasa tsy miankina sy ny fitantanan-draharaham-panjakana amin'ny firenena iray eo amin'ny sehatry ny Fampandrosoana ny lozisialy nasionaly, ankoatry ny maro hafa.
Saingy mamela ihany koa ny rakitsoratra tena izy sy azo ampiharina momba ny maha-ilaina azy io ny fampandrosoana ny lozisialy maimaimpoana ho vokatra azo amidy ho an'ny Orinasa tsy miankina.
Amin'ny famoahana hafa azo inoana momba ny SIGESP, dia hiditra ao amin'ny fametrahana, ny fikirakirana, ny maody, ny fiasa ary ny safidin'ny rafitra isika. Na izany aza, ao amin'ny Tranonkala ofisialy SIGESP Azonao atao ny mangataka fampahalalana marobe kokoa momba an'io Rindrambaiko Maimaimpoana io, ny fampidinana azy, ny fametrahana azy ary ny fanohanany.
Tsara ny manamarika fa marina izany Ny fanohanana (lavitra na mifanatrika) sy ny fiofanana no teboka matanjaka voalaza hoy ny Software sy ny Organisation. Ary ny tsara indrindra dia manana a Demo an-tserasera SIGESP izay mamela ny fikarohana ny fahaizany.
Ary manantena izahay fa ity na rindrambaiko fitantanana fitantanana ny daholobe maimaim-poana amin'ny ho avy dia tsy mitsaha-mitombo ary mahomby amin'ny firenena tsirairay., miaraka amin'ny haitao maoderina maimaimpoana bebe kokoa toy ny PHP7, MariaDB ary Blockchain Technology (Blockchain), ho tombontsoan'ny Societies, States ary orinasa tsy miankina.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » SIGESP: Rafitra fitantanana Public Integrated - Rindrambaiko maimaim-poana ho an'ny orinasa tsy miankina
Mpampiasa tsy faly dia hoy izy:
Vao avy nanamarina aho, ary tsy manome ny fampidinana ny kaody loharano intsony ny tranokala toy ny nataony nandritra ny 3 ka hatramin'ny 4 taona, araka ny nolazaina tamiko. Ankehitriny dia mila mandoa vola ianao raha te hahazo rohy mankany amin'ny kaody loharano sy ny tahiry ary lafo be ho an'ireo izay te hanandrana azy.
Mamaly amin'ny mpampiasa tsy faly
Ny fandoavam-bola dia mitovy amin'ny $ 1 amin'ny volam-pirenena Venezoeliana, fa raha mila mahafantatra bebe kokoa momba ny SIGESP ianao na mahazo fitaovana fanampiny dia manandrama mizaha ity rohy web ity:
Andrew Sandoval dia hoy izy:
Salama hariva, soa, misy mahalala ny solonanarana sy ny tenimiafin'ny demo ...
Mamaly an'i andres sandoval
Data mba hiditra ao amin'ny rafitra:
Teny miafina: 123
DM dia hoy izy:
Inona no ifandraisan'ity rafitra ity amin'ny SUGAU? Mitovy ve izy ireo sa modely iray an'ny iray hafa?
Mamaly an'i DM
Miarahaba, DM! Ny SUGAU dia fork an'ny SIGESP. Amin'ny maha-rindrambaiko malalaka venezoeliana azy, misy andrim-panjakana sasantsasany nanitsy sy nanova azy ho lasa heverina ho fork. Ohatra: http://www.uds.edu.ve/sugau/sigesp_conexion.php
crillosoft dia hoy izy:
Mpanolotsaina zokiolona miasa sy mpanolo-tsaina teknika aho, mipetraka any Arzantina ankehitriny. Raha manana fisalasalana na fanontaniana ianao dia eo am-panompoana anao aho
Mamaly an'i grillosoft
Daniel Vergara dia hoy izy:
Super tena tsara, no ilaiko maika
Mamaly an'i daniel vergara